Ny toeranao ankehitriny: Home>Vaovao
KOSMOS-amin'ny tsipika an-tserasera faha-127 amin'ny tany Canton
JUN15-JONA 24,2020, Noho ny COVID-19, nanao Ivato Ivato izahay. Nasehonay ny ohatra farany ataontsika amin'ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny Internet. Betsaka ny olona mijery an-tserasera, ary nahavita fahombiazana lehibe isika. Ny vokatra vaovao dia eken'ny mpanjifa tsara ihany koa. Mino izahay fa ho avy tsy ho ela ny valan'aretina, ary atsy ho atsy dia hifanatrehana ny mpanjifantsika.
KOSMOS-Mahafaly amin'ny lafin-javatra 126
Nandritra ny lanonana fahefatra faha-126, KOSMOS dia namolavola drafitra vaovao maro ary nanintona ny sain'ireo mpanjifa eropeana maro.
KOSMOS-Fanasana ho an'ny Laosera ho an'ny kanto 124
Tiako ny manasa anao rehetra ho tonga hijery ny tranoheva misy anay ao amin'ny tsenambarotra faha-124 an'i China Import & Export ¨C GuangZhou (PAZHOU COMPLEX) dingana faha-3, OKT.31 - NOV.4 2018
Fanasana ho an'ny GO TEX FAIR 2018 - Brezila
Tiako ny manasa anao rehetra ho tonga hijery ny tranoheva misy anay ao amin'ny GO TEX FAIR 2018 manomboka amin'ny Sep.11-Sep.13 2018.
Nitsidika ny KOSMOS ny Kaomisera lefitra ao Jiangsu tao amin'ny Kanto Voahangy
Ao amin'ny La cort dantale faha-123 dia tonga nitsidika ny trano fandraisantsika ny praiminisitra lefitr'i Jiangsu. Tao amin'ny tranoheva, hoy ny filoha lefitra: KOSMOS dia marika malaza ao Nantong, tena tsara ny endrika sy ny vokatra.
Lehibe indrindra fanamainty saro-bidy Sets mpamatsy
Hatramin'ny taona 2008 dia efa nanatrika ny fivoriana i Canton Fair nandritra ny 9 taona ny orinasanay.Raha malaza amin'ny maha mpamatsy mpamatsy lamba vita an-tsokosoko tsara indrindra sy malefaka indrindra an'ny shinoa. Ny mpanjifa vaovao sy misy dia tonga ny baiko isan-karazany isaky ny andiany.